Hawaii Volcano Eruption Kugadzira Anogona Akashata Emweya Hwakanaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii Volcano Eruption Kugadzira Anogona Akashata Emweya Hwakanaka
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kuputika kweHawaii kuumba vog
Vagari vemuHawaii nevashanyi vanokurudzirwa kuti vagadzirire uye vazive mamiriro akapoterera, uye manzwiro avanogona kana kuita kune vog - volcanic utsi - mumhepo ichibva kuGreat Island yeHawaii.
Nekuda kwekuputika kwakatanga nezuro kubva kuHalema'uma'u crater kumusangano weKīlauea Volcano, vog mamiriro uye sulfur dioxide (SO₂) mweya mazinga ari kuwedzera nekuchinja.
Eruptive chiitiko chiri mukati meHawai'i Volcanoes National Park, zvisinei, kushanduka kwemamiriro ezvinhu emhepo kwakagadzira matambudziko epakati ehunhu hwemhepo kumadokero kwemusangano.
Nzvimbo dzakakanganiswa dzinosanganisira Pahala, Nā'ālehu, Ocean View, Hilo, uye East Hawai'i.
Yakashata yemhando yemhepo uye yakawedzera nhanho dzeSO₂ kubvira iyo kutanga kwekuputika zvinogona kukonzera matambudziko nehutano hwekufema, kunyanya kune vanhu vane hanya. Mamiriro ezvinhu ari kuchinja nekukurumidza, uye husina kunaka mweya wemhando inokonzeresa mhedzisiro yehutano inogona kuve yakanyanya kutariswa.
Kana zvikaitika mamiriro ezvinhu, anotevera matanho ekudzivirira.
Deredza mabasa ekunze anokonzera kufema kwakanyanya. Kudzivirira kuita kwekunze uye kurovedza muviri panguva yemamiriro ezvinhu kunogona kudzikisa kuratidzwa uye kudzikisira njodzi dzehutano. Izvi zvinonyanya kukosha kumapoka akaomarara akadai sevana, vakwegura, uye vanhu vane mweya wekufema usati wavapo kusanganisira asthma, bronchitis, emphysema, uye chisingaperi chirwere chemapapu uye chemoyo.
Garai mumba uye vharai mawindo nemasuo. Kana iyo air conditioner ikashandiswa, isa kuti itorezve.
Kana iwe uchida kuti ubude kunze kwenzvimbo yakakanganiswa, vhura iyo mota yemhepo inogadzirisa uye woiisa kuti itorezve.
Nguva dzose chengetedza mishonga paruoko uye zviripo nyore.
Mazuva ese mishonga yakatemwa yezvirwere zvekufema inofanirwa kutorwa panguva uye inogona kudzivirira kubva pamhedzisiro yesulfure dioxide.
Rangarira kuti kufukidza kumeso uye masiki anoshandiswa kudzivirira kupararira kwe COVID-19 hazvipe dziviriro kubva kuSO₂ kana vog.
Bata chiremba nekukurumidza sezvazvinogona kana paine matambudziko ehutano anokura.
Usapute fodya uye dzivisa hutsi hwefodya.
Inwa zvinwiwa zvakawanda kuti urege kupera mvura.
Iva nehurongwa hwemhuri hwekukurumidzira hwakagadzirirwa uye hwakagadzirira.
Teerera yambiro nevematunhu uye ehurumende manejimendi manejimendi manejimendi.
Vashanyi kuHawai'i Volcanoes National Park vanofanirwa kucherechedza kuti matombo uye kuputika kunogona kuburitsa dota rakaumbwa negirazi rinoputika uye zvidimbu zvedombo. Aya madota pari zvino anomiririra njodzi diki, asi guruva remadota munzvimbo dzakatenderedza musangano weKīlauea zvinogoneka.
Dhipatimendi reHawai'i rezvehutano (DOH) riri kukurudzira vagari nevashanyi kuti vashandise zviwanikwa zvinotevera zvinopa ruzivo rwakakwana, rwakajeka uye rwazvino nezve hutano hwevog, maitiro ekuzvidzivirira, fungidziro yemhepo uye yemhepo, mhando yemhepo, shanduko mamiriro , uye mazano evashanyi:
Hawaiʻi Interagency Vog Ruzivo Dashibhodhi yeiyo yakazara yakazara uye yazvino-padanho ruzivo rwepamhepo pane vog uye SO₂ kubva kune volcano chiitiko.
DOH's Yakachena Mhepo Bazi inochengetedza padyo-chaicho nguva network yemhepo mamonitor monitors ayo anoona SO₂ uye inosanganisa chinhu.
Nyika dzakabatana Geological Society (USGS) Kīlauea Volcano Dzidzo.
National Parks Service ruzivo rwekushanyira zvakachengeteka Hawaiʻi Volcanoes National Park.
Nhungamiro yeDHOH pane Pfupi-pfupi SO₂ Matanho Ekupa Mazano.